फोक्सोको एक जटिल रोग सिओपिडी के हो ? लक्षण र बच्ने उपाय | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalफोक्सोको एक जटिल रोग सिओपिडी के हो ? लक्षण र बच्ने उपाय
Home स्वास्थ्य फोक्सोको एक जटिल रोग सिओपिडी के हो ? लक्षण र बच्ने उपाय
सिओपिडी भएमा श्वास नली सुन्निने तथा फोक्सोबाट निश्चित समिति गतिमा हावा निस्कने र पस्ने गर्छ । क्रोनिक ब्रोनकाइटिस तथा इम्फजिमा सिओपिडाको आम परिस्थिति हो ।
सिओपिडीका कारण फोक्सोमा क्षति पुगेमा यसलाई निको पार्न सकिदैन । यदपी, यसको लक्षणलाई नियन्त्रण गरेर थप नोक्सान हुनबाट फोक्सोलाई जोगाउन सकिन्छ ।
क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज ( सिओपिडी) भएमा व्यक्तिलाई सास लिनमा कठिनाई महसुस हुन्छ । यो समस्या विस्तारै विस्तारै विकसित हुने गर्छ । त्यसैले यो रोग कहिलेदेखि लागेको हो भन्ने यकिन गर्न मुश्किल हुनसक्छ ।
सुरुवाती चरणमा सिओपिडीका कुनै लक्षण नदेखिन वा हल्का लक्षण देखिन सक्छ । तर जब रोगले जटिलता निम्त्याउन थाल्छ, तब यसले निम्न लिखित लक्षण देखाउन थाल्छ ।
-सास फेर्नमा समस्या,
-छिटो छिटो सास फेर्नु
-स्वाँ स्वाँ हुने
-छातीको संक्रमण हुने
-छाती कडा हुने
-अत्याधिक खोकी लाग्ने
जब यो समस्या थप जलि बन्न थाल्छ, व्यक्तिलाई नियमित कार्य जस्तै, सिडी चढ्न, लुगा लगाउन समस्या हुने गर्छ । जसले गर्दा व्यक्ति थकित हुने, तौल कम हुने, मांसपेशी कमजोर हुने गर्छ ।
सिओपिडीको समस्या भएका व्यक्तिले यसबाहेक पनि विभिन्न लक्षण महसुस गर्न सक्छन् ।
सिओपिडीको मुख्य कारण
सिओपिडी हुनुमा धुमपान प्रमुख कारण मानिन्छ । त्यस्तै, धुमपान गर्ने व्यक्तिको नजिकमा बस्ने व्यक्तिमा पनि सिओपिडी हुने सम्भावना उच्च हुने गर्छ ।
त्यस्तै, धुलो, धुवाँ, वायु प्रदुषणको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने व्यक्तिमा पनि सिओपडी हुने सम्भावना उच्च हुने गर्दछ ।
त्यसबाहेक, निश्चित रोग अल्फा वान् एन्टीटि्रप्सिन डिफिसियन्सीका कारण पनि सिओपिडी हुने गर्छ भने फोक्सोको संक्रमणका कारण पनि सिओपिडी हुन सक्छ ।
सिओपिडी न्युमोनिया र इन्फ्लुएञ्जाका कारण हुँदैन । तर जो मान्छे सिओपिडीको उच्च जोखिममा छ , उनीहरुलाई भने यसले थप जटिलता निम्त्याउन सक्छ ।
त्यसैले, सिओपिडीको उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिले यस विरुद्धको खोप लगाउन जरुरी छ ।
सिओपिडीका विभिन्न प्रकार हुन्छ । जुन सामान्य समस्याबाट सुरु भएर मध्यम हुँदै जटिल हुने गर्छ ।
सामान्यतया, जब हावा स्वास नली ( ट्रेकिया) हुँदै हावा फोक्सोमा प्रवेश गर्छ, तब उक्त हावा फोक्सो दुई ठूलो नली ब्रोनसियल ट्युब हुँदै फोक्सोमा प्रवेश गर्छ । उक्त फोक्सोमा ब्रोन्कियल ट्यूब रुखको हागाँ झै ससाना हाँगाामा विभाजित हुन्छ । जसको सतहमा करौडौ ससाना हावाको थैली समूह बनाएर बसेको हुन्छ । हवाले भरिएको उक्त थैलीको बाहिरी परतमा सानो पर्खाल जस्तो हुन्छ, जुन ससाना रक्तनलीले भरिएको हुन्छ ।
सिओपिडी भएमा वायुमार्गबाट वायु भित्र जान र बाहिर निस्कन मुश्किल हुन्छ । जसले गर्दा वायुमार्ग र हावाको थैलीको लचिलोपना नष्ट हुन्छ । यही कारण हो कि सास फेर्दा फोक्सोमा हावाको केही अंश फस्दछ र हावाको थैलीमा बनेको पर्खालमा क्षति पुगी उक्त नली बाक्लो हुनुका साथै सुन्निने गर्छ । जसले गर्दा स्वास नलीमा सामान्य भन्दा बढीमात्रामा म्युकस (खकार) उत्पादन हुन्छ ।
उक्त म्युकसले श्वास नलीमा अवरोध खडा गरी हावालाई फोक्सोबाट बाहिर निस्कनबाट रोक्छ । परिणामस्वरुप, व्यक्तिलाई सास फेर्नमा कठिनाई हुने गर्छ ।
को पर्छ सिओपिडीको जोखिममा ?
धुमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने व्यक्ति सिओपिडीको मुख्य जोखिममा रहने गर्दछन् । त्यसबाहेक, धुमपानको सम्पर्कमा आउने व्यक्ति पनि यसको जोखिममा पर्ने गर्छन् ।
त्यसबाहेक, धुलो, धुवाँ, प्रदुषण तथा विभिन्न रसायनको प्रत्यक्ष जोखिममा रहेका व्यक्ति समेत यस रोगको जोखिममा पर्ने गर्दछन् ।
४० वर्ष उमेर पुगेका जुनसुकै व्यक्ति सिओपिडीको मुख्य जोखिममा रहने गर्छन् । यद्यपी, यो रोग महिलाको तुलनामा पुरुषमा धेरै देखिने गरेता पनि यस रोगबाट मृत्यु हुनेमा महिलाको संख्या धेरै छ ।
एक तथ्यांक अनुसार अमेरिकामा मानिसको मृत्यु हुने प्रमुख कारणमध्य सिओपिडी तेश्रो स्थानमा पर्छ । सन् २०२० सम्ममा विश्वमा मानिसको मृत्यु हुने प्रमुख कारणमध्य सिओपिडी तेश्रो प्रमुख कारण हुने अनुमान गरिएको छ ।
सिओपिडी एक पटक भएमा यसलाई निको पार्न सकिदैन । यद्यपी, जीवनशैलीमा सुधार ल्याएर तथा स्वस्थ खानपानका साथमा नियमित एक्सरसाइज गरेर यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । त्यस्तै, नियमित औषधीको सेवन, ओओपिडी विरुद्धको खोप, अक्सिजन थेरापीमार्फत पनि यसको उपचार गर्न सकिन्छ ।
त्यसबाहेक, चिकित्सकसितको परामर्श, धुमपान त्यागेर, स्वस्थ खानपान तथा नियमित व्यायाममार्फत पनि यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ ।
यसका बाबजुद पनि सिओपिडी नियन्त्रित नभएमा चिकित्सकहरुद्धारा फोक्सोका क्षतिग्रस्त कोषिका हटाएर तथा फोक्सोको प्रत्यारोपणद्धारा पनि यस रोगको उपचार गरिन्छ ।
सिओपिडी भएमा ध्यान दिनु पर्ने कुरा
-यो रोग समयसँगै बढ्न सक्ने हुदाँ सिओपिडीबाट ग्रसित व्यक्तिले स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ ।
त्यस्तै, ज्वरो तथा संक्रमणका कारण पनि सिओपिडी क्रोनिक बन्न सक्छ । जसले गर्दा सास फेर्न कठिनाई हुने, छाती कडा हुने, अत्याधिक खोकी लाग्ने, खोकीसँगै खकार निस्कने र खकारको रङ परिवर्तन हुने तथा कसैकसैलाई ज्वरो आउने गर्दछ । यस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्तै चिकित्सकलाई जचाँउनु पर्छ ।
अनमोल र नव–नायिका सुहाना मनाङको आइस लेकमा रोमान्टिक मुडमा